Shir muuqaal ah
Uma baahnid app si aad Omegle ugu isticmaasho taleefankaaga ama tablet-kaaga!Websaydhku si fiican ayuu ugu shaqeeyaa mobilka.
La kulan shisheeyaha danahaaga!
Omegle(oh meg ull)waa hab fiican oo lagula kulmo saaxiibo cusub, xitaa markaad ku celcelinayso kala fogaanshiyaha bulshada.Markaad isticmaasho Omegle, waxaa lagugu lammaaniyay si aan kala sooc lahayn qof kale si aad u wada hadasho mid-ka-mid ah.Haddii aad door bidayso, waxaad ku dari kartaa danahaaga waxaana si aan kala sooc lahayn loogu lammaanin doonaa qof doortay qaar aad isku dan ah.
Si lagaaga caawiyo inaad badbaado, sheekadu waa qarsoodi ilaa aad u sheegto qof aad tahay (lama talin!), Oo waxaad joojin kartaa wada sheekaysiga wakhti kasta.Ka eeg Shuruudaha Adeegga iyo Tilmaamaha Bulshada wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan waxa la sameeyo iyo kuwa aan la samayn ee isticmaalka Omegle.Omegle video chat waa dhexdhexaadin, laakiin ma dhexdhexaadin waa qumman yahay.Isticmaalayaasha ayaa ka masuul ah dhaqankooda marka ay isticmaalayaan Omegle.
Waa inaad tahay 18+ ama 13+ haysta ogolaanshaha waalidka iyo kormeerida isticmaalka Omegle.Ka eeg Shuruudaha Adeegga Omegle wixii macluumaad dheeraad ah.Ilaalinta kontoroolka waalidka ee caawin kara waalidka waa kuwo ganacsi ahaan diyaar ah waxaadna macluumaad dheeraad ah ka heli kartaa https://www.connectsafely.org/controls/ iyo sidoo kale boggaga kale.
Fadlan ka tag Omegle oo booqo goobta dadka waaweyn haddii ay taasi tahay waxa aad raadinayso, oo aad tahay 18 ama ka weyn.
Wadajir, waan sameyn doonaaXidhiidh sugan meel kasta oo aad joogto
Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawino inaad la xiriirto, la xiriirto oo aad muujiso fikradahaaga si aad wax badan u wada gaartaan.Waxaan ku hanweynahay in ay nagu kalsoonaadaan malaayiin ganacsi, ganacsiyo yaryar iyo shakhsiyaad adiga oo kale ah.
Dhis xiriiro ganacsi oo xoogan, xooji wada shaqaynta, oo martigeli shirar ka qayb qaadasho leh HD muuqaal iyo maqal ilaa 1,000 ka qaybgalayaal ah.
La qabso qolalka shirarka si aad ula kulanto isbeddelka baahida xoogga shaqada iyo dheelitirka xafiiska iyo qulqulka shaqada fog ee HD muqaal iyo maqal, wadaaga macluumaadka wireless, iyo boorarka fariimaha isdhexgalka.
Ku xooji codkaaga xalka teleefoonka daruuriga ah ee caalamiga ah oo leh habayn sugan oo wicitaan ah, safafka wacitaanka, SMS-ka, wacitaanka shirarka, iyo in ka badan.
Ka faa'iidayso shaqada xafiiska ee guriga - shirarka fiidyowga ah, wicitaanada telefoonka, boorarka fariimaha iyo faallooyinka qalabkaaga iskaashiga shakhsi ahaaneed.
Xalka sheekeysiga waxaa lagu daraa koontada wuxuuna fududeeyaa socodka shaqada, wanaajiya wax soo saarka, wuxuuna xaqiijiyaa wadashaqeyn sugan oo dhexmarta shaqaalaha gudaha iyo dibadda ururka.
Ku xooji oo ku fududee khibradaada Zoom in ka badan 1,000 apps iyo isku xidhka jadwalka, iskaashiga, barashada, qoraalka, CRM, iyo in ka badan.
Zoom wuxuu bixiyaa Webinars Fiidiyowga ah iyo alaabtii Dhacdooyinka Zoom ee ugu dambeeyay si ay u daboolaan dhammaan baahiyahaaga dhacdada farsamada.Abuur waayo-aragnimada dhabta ah ee qof kastaa jeclaan doono.Ku bilow maanta Dhacdooyinka Soo Dhaweynta iyo Webinarada Fiidiyowga ah.
Adeegso API-yadayada, SDK-yada, webhooks-yada, iyo in ka badan si aad u dhisto abka qani ah, isku-dhafka gaarka ah, iyo shaqaynta cusub ee buuxinaysa socodka adeegga Zoom ee jira.
Nidaamyada onlaynka ah ee uu martigeliyay Server-ku si fudud ayaa loo xisaabin karaa oo loo qiyaasi karaa daawadayaasha cusub.
Madadaalo Random Video Chat App
Ku soo dhawoow ChatSpin, oo ah barnaamij wada sheekaysi muuqaal ah oo random ah kaas oo sahlaya in dad cusub lala kulmo khadka.ChatSpin waxa ay soo bandhigtaa muuqaalada wada sheekaysiga oo ay ku jiraan waji-xidho, lab iyo dhedig iyo filtarrada dalka, wada sheekaysiga gaarka ah, iyo in ka badan.Isla markiiba la hadal dadka aan tooska ahayn ee adduunka oo dhan.Samee saaxiibo cusub, raadso taariikh, muuji kartidaada, talo weydiiso, ka hadal siyaasad, ama kaliya ku raaxayso sheeko muuqaal ah oo dib loo dhigay qof aanad waligaa la kulmin.Waa bilaash waana sahlan tahay in la bilaabo ku sheekeysiga muuqaalka iyo madadaalada.Marnaba ma ogaan kartid cidda aad la kulmi doonto xiga!
Haddii aad raadinayso inaad la xiriirto dad cusub, wada sheekaysiga fiidyaha ee aan tooska ahayn waa dariiqa loo maro, ChatSpinna waa gaadiidka ku geyn doona halkaas.Waanu habaynnay abkayaga si aad u hesho waxaad raadinayso—hab aad kula xidhiidho dad cusub.
Haddaba maxaad sugaysaa?La hadal dad aan toos ahayn hadda!
Astaamaha Chat Cam-ka bilaashka ah
Waxaan ku bilownay Chatspin hawl-si aan u fududeyno in aan la bilaabo sheeko aan toos ahayn oo lala yeesho shisheeyaha.
xajiTaasi maaha sheekada oo dhan
Adduun badan oo midaysan, adduun aad la samayn karto xidhiidho dhab ah dadka kale, gudaha iyo caalamkaba, waa waxa ku kexeeyey kooxdeena inay abuuraan abkayaga fiidyaha.Wicitaan kastaa waxa uu keenaa in dunidu soo dhawaato, waxa ay ina caawisaa in aynu helno dhego aynu wax ku dhegaysano,waxana ay ina siinaysaa meel aan iskula baadho fikradaha.
Chatspin waxay kuu sahlaysaa inaad la sheekaysato dad aan toos ahayn oo adiga kugu habboon.Macasalaama inaadan la kulmin dadka saxda ah.Chatspin's Chatspin's chat video app waa marinka aad ku dareemayso inaad si macno leh ugu xidhan tahay kuwa kale, dhow iyo ka fog.
Face ka waji, qaabka door bidaynta ee Tinder ee wada sheekaysiga fiidyowga ah, ayaa hadda si caalami ah uga socda
Tinder, oo hadda ah barnaamijka shukaansiga ugu weyn adduunka ee loogu talagalay dadka si ay u helaan taraq oo ay kula xiriiraan, ayaa ballaarinaysa muuqaal kale maanta si loo kordhiyo waqtiga ay dadku ku qaataan app-ka, iyo isgaarsiinta ay ku dhex yeelan karaan.
Waji ka waji, oo ah muuqaal ikhtiyaari ah oo Tinder bilaabay horaantii sanadkan kaas oo u ogolaanaya isticmaalayaasha inay fiidyowga ku wada sheekeystaan ​​​​iyaga oo aan is dhaafsanin macluumaadka shakhsiyeed kaliya marka ay wajahayaan kamarada, ayaa hadda ku fideysa caalamka oo dhan, laga yaabee in waqti ku haboon waqtigaas oo dad badani aysan si shaqsi ah ula kulmin.
Tinder si fiican ayuu uga warqabaa dhinacyada xamaasadda leh ee adeegyada shukaansiga, oo si run ah waxay u tibaaxday sida aanay u ahayn kooxda muuqaalka ee shirkadu balse ay kooxdeeda Aaminadda iyo Badbaadada ah midkan dhisay.
"Waan ku faraxsanahay inaan la wadaagno in qaabka weji ka waji uu u soo baxayo bulshadeena caalamka ka dib markii aan jawaab celin wanaagsan ka helnay xubnaheena kuwaas oo horey u helay," ayuu yiri Rory Kozoll, Madaxa Kalsoonida iyo Alaabada Badbaadada ee Tinder."Tani waxay ku daraysaa liiskayaga sii kordhaya ee sifooyinka lagu dhisay badbaadada xubnaha inta lagu jiro safarkooda shukaansi, sida Xaqiijinta Sawirka, Xarunta Badbaadada iyo farsamadayada ogaanshaha fariinta xun.”
Shukaansiga apps-ka waxa uu u ekaan karaa qayb qariib ah oo lagu kobcinayo xilli ay qaar badani diiradda saarayaan - ha ahaato xeerarka dawladda awgeed, ama talooyinka khubarada caafimaadka, ama labadaba - fogaynta bulshada iyo isu-ururinta goobooyin yaryar, caan ah, joogto ah.
Laakiin dhab ahaantii halkan waxa ay u muuqataa fursad: waxay noqdaan hab ay dadku isku xidhmaan oo ay ku kulmaan midba midka kale, wakhti baararka badan iyo goobaha kale ee dhaqanka ee la xirayo, ama ugu yaraan ay helaan hawlahooda caadiga ah oo aad u xaddidan. , dadkuna si fudud bay isu arki doonaan si aan qarsoodi ahayn dhammaan sababaha aad qiyaasi karto.
Xaalad ahaan, Tinder, sida laga soo xigtay tirakoobyada AppAnnie, waxay sii waday inay ku sii jirto darajooyinka ugu sarreeya ee soo dejinta barnaamijyada qaab nololeedka sanadkan (hadda waxay ku jirtaa lambarka saddexaad ee iOS ee Maraykanka).
Muuqaalka sheekeysiga fiidiyowga ayaa kaliya xoojinaya fikradda adeegsiga app-ka ma ahan oo keliya in la arko cidda halkaas ku sugan iyo cidda aad la xiriiri karto, laakiin si aad ula xiriirto dadkaas.
Mid kale oo halkan lagu daray waa taasi maaha mid dhammaystiran oo bilaash ah-dhammaan spamfest ee dadka aan loo baahnayn ee kuu soo socda, sida laga yaabo inay ku jiraan baar.
Tinder wuxuu sheegay in labada dhinacba ay u baahan yihiin in lagu dhex dooriyo sifada, oo ay tahay inaad mar hore la mid noqotay qaybta caadiga ah ee abka ka hor inta aan wada sheekaysiga la bilaabin.
Xitaa markaa waxaad dooran kartaa inaad iska indhatirto sheekeysiga fiidyowga marka ay soo galaan, maadaama laga yaabo inaad wacdo taleefan caadi ah.
Oo, haddii aad helayso dad naxdin leh oo kugu sheegaya waxyaabo aan munaasib ahayn oo ay kuugu yeeraan wax badan, oo aadan rabin inaad soo jeediso muuqaalka guud ahaan, waxaad dadka u sheegi kartaa adigoo u guuraya profile-kooda oo raacaya tilmaamaha "warbixinta".
Tinder waxa uu ku ciyaarayay muuqaalo muuqaalo ah mudo sanado ah si uu u kordhiyo hababka ay dadku ula falgalaan app-ka, muuqaalku waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna soo jiidashada badan ee abka hadda.
Waxay noqotay natiijo isku dhafan.Tinder Loops, hab kale oo lagu muujiyo naftaada, ayaa jirtay ilaa 2022 walina way socotaa.Dadaallada kale sida fiidiyoowgeeda Swipe Night apocalyptic is-dhexgalka fiidiyooga gudaha-app-ka ayaa la dajiyay bishii Maarso sababta oo ah Covid-19, in kasta oo dhawaanahan ay u egtahay in bandhiggu uu dib ugu soo nooleynayo suuqyada kale.
Callpy waxay kuu ogolaan doontaa inaad ogaato suurtagalnimadaxiriirka aad la leedahay booqdayaasha goobtaada.
Tani waxay hubin doontaa kobaca iibka, si weyn u wanaajisobeddelka goobta, iyo kordhintabooqashooyinka soo noqnoqda ee booqdayaasha.
Sheekaysi bilaash ah
19 maalmood oo wicitaano bilaash ah
La tasho browserka
Hel 19 maalmood demo
Sheeko qoraal ah
Ka hel xiriirada booqdahailo furan!
Magaca hore, magaca dambe
Ku xidhnow boggawarbaahinta bulshadashabakadaha
Bogagga mareegaha ayaa la booqday
Xogta uu isticmaaluhu ka tago waxaa lagu dhejin karaa CRMwaxaana sidoo kale loo dhejin karaa fayl ahaan
Ururinta xogta booqdayaasha waxaa la fuliyaa iyadoon loo eegin joogitaanka la taliye.Xidhiidhyadu waxay geli doonaan CRM (AMO ama Megaplan) duullimaad la'aanteed ka qaybqaadashadaada.
isdhexgalka leh crm caan ah
Ku dar macmiil cusub iyo hawlo CRM inta lagu jiro habka wada hadalka
wax walba waa sahlan yihiin
chat free la booqdayaasha iyada oo aan xaddidnayn shaqada
Sheeko bilaash ah weligeed
Ma xadidna shaqada, ma jiro waqti xaddidan
Waanu ka fiicanahay tartamayaashayada
Sheeko shaqaynaya oo bilaash ah
27 shaqo oo bilaash ah
27 qalab ilaalinta tayada adeegga
Waxaan siinaa hadiyado tixraaca asxaabta
Laga bilaabo 215 ₽ goob shaqo oo lataliye ah bishiiba
3 kanaalo isgaarsiineed oo dheeri ah
Sheekaysi, maqal, muuqaal, la socodka dhaqdhaqaaqa
Xakamaynta joojinta, isgaarsiinta maqalka/muuqaalka
19 maalmood oo kobaca iibka, 20 shaqo
Dabacsanaanta iyo Fududeynta Hawlaha iyo Qalabka
Habka dhaqameedee la-talinta internetka
Wicitaannada tooska ah ee bilaashka ah eeka imanaya booqdayaasha
Ku samee la-tashi muuqaal toosah goobta
Ku turjun booqdahaboggaga, tus waxa kujira
La socodhaqdhaqaaqa booqdahawakhtiga dhabta ah
Calaamadee oo ku sharaxwalxaha boggabooqdaha
Callpy waxay si toos ah u siin doontaa caawimobooqdahacaajisay
Waxka bedel qoto dheer ee qaabkawidget -ka oo leh xubnoaqoonsi shirkadeed
Is dhexgalka CRM
Si toos ah ugu kaydixiriirada macaamiisha CRM
Uruurinta xiriiradabooqdayaasha goobtaiyada oo loo marayo foomka Callpy
Abuur kooxo la taliyayaal ahU qaybisocodka booqde iyaga
Ku biir sheekeysiga fiidyaha ee ugu caansan Ruushka ee shukaansi , dhexgalka bulshada ama kaliya waqti fiican hel si aad ula xiriirto asxaabta cusub iyo saaxiibada hore ee shabakada Maalin kasta Shabakadda Caalamiga ah ee Adduunka ayaa helaysa caan waxayna bixisaa habab cusub oo xiiso leh oo lagu wada xiriiro internetka adduunka oo dhan, iyadoo la kaashanayo wada-hadalka fiidiyowga iyo adeegyada kale ee shabakada si fudud oo ku habboon u baro dadka xiisaha leh, ma aha oo kaliya isgaarsiinta. Sheekada muuqaalka asalka ah ee isgaarsiinta iyo shukaansiga kamarada Webka chatroulette-worldwide.com isgaarsiinta aduunka online. Marka loo eego tirakoobka, dhalinyaro badan (haween iyo rag) ayaa ka helaya kala barkooda shukaansiga fiidiyowga ee wada sheekaysiga fiidiyowga iyaga oo aan qolka ka bixin! Guusha kheyraadka.
Sirta guusha chat-ruletka.net fudud, mahadsanid dhinacyada kamaradaha webka marka laga reebo isgaarsiinta waxay awoodaan inay qiimeeyaan midba midka kale muuqaal ahaan sababtoo ah tani waa muhiim in la sahamiyo qeybta labaad. Chat helay caan ah oo badan ay sabab u tahay suurtogalnimada in la helo saaxiibo si buuxda random sida loo ciyaaro miiqan dhalada, meesha, iyo helay dhammaan magaca la yaqaan ee roulette chat ah. Talooyin iyo tabaha Noqo sida daacadda ah naftooda sababtoo ah markaad nolosha dhabta ah kula kulanto saaxiibo cusub oo fiidiyoow ah ayaa qof kasta oo waraysanaya wuxuu rabaa inuu arko dad dhab ah halkii uu ka arki lahaa jilayaasha khayaaliga ah ee ku jira sheekaysiga fiidiyowga. La xidhiidh, raadso saaxiibo, saaxiibo hore, isku day inaad wada hadal la yeelato qofka jawiga wanaagsan, ka fogow aflagaadada, ka dhig sheekada mid xiiso leh oo madadaalo leh - waa furaha shukaansiga guuleysta! Samee bogaadin, hadiyado sii! sida nolosha dhabta ah,hadiyado waxaa la siiyaa si ay u fahmaan soo wacaya in dareenka heegan u ah iyo ka soo horjeeda aad ka mid ah saxaabada iyo asxaabta. Xeerarka wada sheekeysiga fiidyaha ee ruushka coomeet memeet wuxuu bixiyaa wada sheekeysi adeeg si wanaagsan. Wadahadalka sheekadu waa isticmaaleyaal ku hadla luqada Ruushka.
Si adag ayaa loo mamnuucay ma aha anshax, ma faafreeb muujinta nooc kastaba ha ahaatee.Wadahadalkaas oo ku saabsan mowduuca galmada ee carruurta aan qaan gaarin ilaa 18 sano.Waa mamnuuc in la muujiyo qaybo gaar ah oo qasab ah.Badbaadada Nabadgelyada Wadahadalka Fiidiyowga ah waxay yareysaa tirada dadka aan damiir lahayn Go'aan ku saabsan diiwaangelinta fudud taas oo aan adkaan doonin laakiin waxay caawin doontaa chat-ka shaandheynta iyo xannibista kuwa soo galaya.
Goobaha ugu wada sheekaysiga ee ugu fiican sida omegle ee 2022
Intarneedka waxa aanu u isticmaalnaa hawlo badan oo kala duwan, laakiin mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn waa in aanu noqono bulsho.Baahida is dhexgalka waa xaalad bini'aadmi ah oo u keenta raaxada iyo qanacsanaanta inta badan dadka caadiga ah.Taasi waa sababta Facebook uu caan u yahay.
Laakiin waxaa jira goobo kale oo badan oo ay dadku ku kulmi karaan.Qaar badan oo kuwan ka mid ah waxaa loo yaqaan forums ama sabuuradaha fariinta halkaas oo ay dadku ku dhejiyaan faallooyinka ka dibna dib u soo noqdaan si ay u eegaan haddii qof ka jawaabay.Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira goobo badan oo fududeeya wadaaga wakhtiga dhabta ah kuwaas oo u dhow wada sheekaysiga shakhsi ahaaneed inta aad ku xiran karto internetka.
Mid ka mid ah bogagga ugu caansan waxaa lagu magacaabaa Omegle, halkaas oo xubnuhu ay ku dhexgalaan muuqaal, maqal, ama qoraal keliya.Waa meel aad u fiican in lala kulmo dad aan kala sooc lahayn oo kaliya laga bilaabo wadahadal lala yeesho shisheeye dhammaystiran.Laakin sida inta badan goobaha waaweyn, Omegle waxa ay noqotay mid xad dhaaf ah.
Hoos waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah qolalka wada sheekaysiga tooska ah sida Omegle oo aad kula xiriiri karto saaxiibo cusub.
1. Chatliv:Chatliv - Habka ugu dhaqsaha badan uguna haboon ee loo samayn karo webcam la sheekeysanaya shisheeyaha meel kasta oo aad aduunka ka joogto.Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad gelisaa jinsiga qofka, kaas oo adeeggu isla markiiba dooran doono shisheeyaha ugu habboon ee sidoo kale doonaya inuu la kulmo qof adiga oo kale ah.
Chatliv waa goobta ugu wanaagsan ee lagu sheekeysto fiidyowga iyo sidoo kale mid ka mid ah goobaha ugu caansan ee lagu sheekeysto fiidiyowga.Kumanaan qof oo ku sheekeysanaya had iyo jeer khadka tooska ah ee adduunka oo dhan ayaa jooga qolalka lagu sheekeysto ee khadka tooska ah.
2. CooMeet:Coomeet waa sheeko muuqaal ah oo luuqada Ruushka ah iyo goobta shukaansiga (roulette).mid ka mid ah fursadaha ugu fiican ee chatroulette iyo omegle, in coomeet aad bilaabi kartaa video shukaansi shisheeyaha random ka adduunka oo dhan.Coomeet wuxuu ku shaqeeyaa mabda'a roulette, taas oo macnaheedu yahay inaadan weligaa garanayn cidda aad la sheekaysanayso.Haddii aad caajisayso markaa noocyada sheekaysiga noocan ahi waxay ku keeni karaan xoogaa xiiso leh.
Astaamaha Coomeet:1. Had iyo jeer la xidhiidh qof qalaad2.Sheekomuuqaal ah oo bilaash ah 3. Ku dar dad qalaadliiskaasxaabtasaaxiibada ugu fiican
3. TinyChat:Maanta, TinyChat waa adeegga ugu weyn ee codka iyo sheekeysiga ee internetka.Shirkaddu waxay ku faantaa in isticmaalayaashu ay soo saaraan 5 milyan oo daqiiqo oo hawada ah maalintii.Halkaa waxa aad ka helaysaa kumaankun sheeko oo xataa qaarkood ay bilaabeen dadka deegaankaaga, hadii aad waydo mawduuca aad rabto, waxa aad samayn kartaa mid kuu gaar ah.
TinyChat waxay u ogolaataa ilaa 12 fiidyow durdurror qolkiiba oo waxay isticmaashaa API halkaasoo isticmaalayaashu ay ka daadihin karaan fiidyaha tooska ah bandhigyada lagu hayo adeegga mana aha mid u qalma.Dadku waxay isugu yimaadaan si ay ugu wada xidhiidhaan makarafoon, muuqaal ama fariin degdeg ah.
4. Omegle Webcam:Omegle Webcam waa kan ugu caansan shukaansiga iyo sheekeysiga webcam. In ka badan 20.000.000 isticmaalayaasha diiwaangashan. Chat Roulette Chat Free. goobaha sida omegle.Omegle Webcam waa beddelka bilaashka ah ee Omegle sheekaysiga fiidiyoowga ah ee random, si qarsoodi ah ula hadal shisheeyaha adoo isticmaalaya webcam oo la kulan dad cusub isla markiiba. Fiidiyow la sheekayso isticmaalayaasha aan tooska ahayn, samee saaxiibo cusub. La samee is dhexgalka bulshada ee ku caashaqay omegle.Omegle.webcam waa nooc ka mid ah goobta chatroulette.
5. Bazoocam:Bazoocam waa mareeg kale oo lagu sheekeysto oo aan caadi ahayn oo si weyn hoos loogu dhigay si ay nadiif u noqoto.Sida qaar ka mid ah boggaga kale ee la sheegay, waxaad si lama filaan ah ugu degtay qof kale.Haddii aadan jeclayn waxa aad aragto, markaas waxaad riixdaa badhanka "skip" oo u gudub qof kale.
Bazoocam waxay bixisaa dhowr ciyaarood oo badan oo aad ku biiri karto sidii kuwa baraf jabiya ama haddii aad ku caajisto ka hadalka naftaada.Haddii aad caajis tahay, waxay kuu soo bandhigaan inay sameeyaan wax aan caadi ahayn, laakiin waxay kaaga digayaan inaad dharkaaga xidhato.Isku day inaad xidhato suudh ama aad ciyaareyso muusiga aad jeceshahay.Heck, ciyaar gitaar ama kazoo waxaadna heli doontaa dad badan oo aad la hadasho.
6. FaceFlow:FaceFlow - Nimankan ayaa baraha bulshada u qaadaya heerka xiga iyaga oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay ku sheekeystaan ​​​​muuqaal ah oo qaadi kara ilaa saddex qof markiiba.FaceFlow waxay bixisaa "sheekeysi fiidiyoow bilaash ah iyo kulan fiidiyoow ah oo lala yeesho asxaabta, isla markiiba biraawsarkaaga," laakiin waxaad sidoo kale la hadli kartaa shisheeyaha.Isticmaalayaasha hadda waxay abuuri karaan muuqaal la raadin karo waxayna ku wadaagi karaan sawiradooda iyo fiidiyowyada ay jecel yihiin YouTube.
Marka laga reebo in ay tahay kaliya adeeg kale oo lagu sheekeysto webka, goobtani waxay aad ugu xiran tahay adeegyada waaweyn ee Skype ay bixiso.Waxa ay soo bandhigtaa qoraal iyo sheeko-muuqaal hal mar ah.Si loo sameeyo waxyaabo xiiso badan, FaceFlow waxay sii daysay ciyaar badan oo la yiraahdo Flappy oo u muuqata mid adag.
7. ChatRandom:Chatrandom waxa uu leeyahay yoolal waaweyn oo ay ka mid yihiin in uu la mid noqdo Facebook, Twitter ama YouTube.Kani waa mareeg kamarad kale oo ku xidha isticmaale isticmaale kale oo random ah.Waxay u muuqatay beddelka Chatroulette sababtoo ah goobta ayaa badashay xeerarka marar badan.
Si loo gaaro yoolkaas, waxay isu keenaan dadka adduunka oo dhan waxayna si joogto ah ugu daraan dalal iyo luqado cusub.Waxaad dooran kartaa inaad si aan kala sooc lahayn ula dhaqanto hal qof oo kale, koox, ama gabdho.Waxa kale oo aad dooran kartaa doorashada ku hadalka fiidiyowga, isticmaalayaasha khaniisiinta, ama luqad gaar ah.Waxay sidoo kale ku daraan kamarad shabakadeed oo dheeri ah iyo adeegyo kale si ay ula kulmaan waxyaabaha laga filayo isticmaale.
8. Chatroulette:Chatroulette waa adeeg sheekeysi ku salaysan webcam kaas oo leh hab gaar ah oo lagu xiro dadka isticmaala shisheeyaha aan tooska ahayn.Waa in ay la mid tahay ciyaarista roulette Ruush, kaliya halkii aad qori ku dhufan lahayd, waxaad afka ugu aflagaadaysaa fariimaha teebaysan iyo/ama kamaradaha webka, oo haddii aad tidhaahdo ama samayso wax aanu jeclayn lammaanahaagu, way ka tagaan sheekeysiga ("dil") wada hadal).
Waxaa sameeyay 2022kii ilmo 17 jir ah kaas oo goobta ka keenay qolka jiifka guriga waalidkiis.Xitaa xayaysiis la'aan, boggani wuxuu ku koray cabbir aad u weyn xagga ereyga.Ka dib sanado badan oo tijaabo iyo khalad ah, wuxuu ugu dambeyntii gaadhay heer uu si wax ku ool ah u shaandheeyo dabeecadaha aan habboonayn.
Isticmaalayaashu waa inay is-diiwaangeliyaan oo ay oggolaadaan shuruudaha adeegga, iyo kuwa ku xad-gudbay waxaa sifeyn doona dhexdhexaadiyeyaasha goobta. Isticmaalayaasha badankoodu waxay ka hooseeyaan 30 waxaana jira rag ka badan dumarka. Ugu yaraan waa R lagu qiimeeyay.
Xeerarka La kulanka Ajaanibta Online1. Ha samayn ama ha odhan wax aad ka caban karto hadhow. Sheekadaada, qoraalkaaga, codkaaga ama muuqaalkaaga si fudud ayaa loo duubi karaa oo loo isticmaali karaa adiga.2. Haddii lagugu cagajugleeyo, ka warbixi oo geli isticmaalayaasha.Si la mid ah samee haddii aad aragto qof la caayo.3. Cidna ha la wadaagin xogta gaarka ah.4. Khiyaamo-yaqaannada xirfadda leh ayaa macluumaadkaaga khiyaali doona.5. Ha kaga tagin wax shakhsi ah qaabka wada sheekaysiga fiidyowga ah, sida sawirada qoyska ama faahfaahin kasta oo uu qofka ku jira u isticmaali karo si uu ula socdo.6. Bar qoyskaaga sida loo badbaado marka la isticmaalayo mid ka mid ah adeegyadan.In kasta oo intooda badan si weyn loo dhexdhexaadiyay, haddana waxaa jira ugaarsi caqli badan oo halkaas jooga.7. Ku raaxayso... taasi waa waxa ay tahay.